कलंकीमा बाढीले ग्यास पसल बगायो, ग्यास सिलिण्डर समात्न जाँदा एक जना बेपत्ता – PathivaraOnline
Home > समाचार > कलंकीमा बाढीले ग्यास पसल बगायो, ग्यास सिलिण्डर समात्न जाँदा एक जना बेपत्ता
कलंकीमा बाढीले ग्यास पसल बगायो, ग्यास सिलिण्डर समात्न जाँदा एक जना बेपत्ता
admin July 12, 2019 समाचार	0
काठमाडौं । अबिरल वर्षाका कारण काठमाडौं र ललितपुरमा आएको बाढी पहिरोमा परी हालसम्म चार जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंको मूलपानी र ललितपुरको बागमती नगरपालिका–३ मा गरी चार जनाको मृत्यु भएको हो । काठमाडौंको मुलपानीमा घरको पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ३५ वर्षीया सर्मिला यादव, २० वर्षीया निलु यादव र कुन्दन यादव छन् । एकै परिवारका उनीहरु मजदुरी गर्दै गुजारा गर्दै आएका थिए ।
महानगरीय प्रहरी वृत वौद्धका डीएसपी नरेन्द्र चन्दका अनुसार बलराम खत्रीको पक्की घरको पर्खाल भत्किएर टहरामा खस्दा उनीहरुको ज्यान गएको हो । यसैगरी, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार बागमती–३ का ११ वर्षीय सरोज तामाङको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो ।
यस्तै, कलंकीको बल्खु खोलामा बगेर आएको ग्यास सिलिण्डर समात्न बाढीमा हाम्फालेका विनोद चौधरी बेपत्ता भएका छन् । उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कलंकी खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको थियो ।
नदीमा फसेका व्यक्तिको उद्दार गर्न जाँदा… भिडियो सहित
मित्रताको सम्बन्ध सीमासँग सट्टापट्टा हुँदैन, सत्यको अघि झुट टिक्दैन, बीर नेपाली अन्यायका अगाडि झुक्दैनन्… चेतना भया!
जीवनको अन्तिम समयमा रेहानाले आमालाई लेखेकी हृदय छुने यस्तो सन्देश ! एक चोटी अवस्य पढ्नुहोला